Buddhism muhupenyu hwezuva nezuva - chimiro cheChan Buddhism.
RUDZIDZO MUUPENYU HWese HUPENYU
Kuita mindility muhupenyu hwezuva nezuva
Ini ndinonzi Shi Heng Jin
Iine zita repasirese rainer Deyhle
Uye kana iwe uchida Chan tenzi wako mutsva. Tenzi waChan unofanirwa kunge wakaita sevhavha yewachi, seyamu inorira pamubhedha mangwanani. Anofanira kutibatsira 'kusimuka', achinongedzera kune imwe nzvimbo nomunwe wake akatambanudzwa.
Maitiro anoita hupenyu, ini handina kumboda kuve tenzi wechiBhudha, nei ini?
Nechomukati, zvisinei, ndoziva kuti ndinogona, ndinofanira, uye kwete neimwe nzira, kuzadzisa iri basa.
Makore anopfuura makumi matatu apfuura ndakaenda kuChina, kune inozivikanwa-pasi rose Shaolin Tembere, imba yemamongi yechiBuddha muHenan Province. Ikoko ndakagara kwenguva yakareba nemamongi emamongi, vakaita shamwari, vakadzidza kung fu uye vakasangana nedzidziso dzaBuddha.
Abbot Shi Yong Xin paakandibvunza kuti nditsvage Shaolin Temberi Germany muna 2000, mweya wemudzidzisi mukuru akauya pedyo neni.
Tenzi akanaka weChan, sehanyanisi, anokwanisa kubvisa imwe yakasarudzika yehunhu hwekare mushure meumwe, kuunza dingindira re'kujekeswa 'kumberi zvekare uye zvekare, uye kubatsira mushure mekumuka.
Ndinoda kuve yako alarm wachi, alarm yako, murume anokuperekedza kana wamuka.
Tenzi wako, mudzidzisi wako, mumwe wako parwendo, shamwari yako.
Buddhism mune zvipfeko zvitsva
Yakanga iri nguva refu maitiro akandiita muBhudha.
Iwe haugone kutaura kuti izvi zvakaitika usiku humwe chete.
Muhudiki hwangu ndakanga ndisingafarire dzidziso yeBuddha, ndaigona kungonyemwerera zvinyoro nyoro kune vanhu vaitaura nezve karma, kuvhenekerwa kana kuberekwa patsva.
Kung-fu kwakaita kuti uzivi hwemunhu mutsvene huwedzere uye kundijairira, asi handina kuzvinyanya kukoshesa. Asi ini ndainyanya kufarira maonero ake, nzira ine rugare uye yakadzikama yehupenyu yakaita kuti ndide zvimwe.
Kuedza kwangu kuverenga muchiBuddha hakuna zvakare kubudirira. Pese ini ndakawana zvinyorwa zvekare, zvakanyorwa mumutauro wakareba-kuenda, zvisiri nyore kuverenga uye zvakanyatso kunzwisisika, kana ini ndakawana yakawanda nhoroondo, yekufunga nhoroondo.
Ndakawana chete mazwi asina kujeka pamusoro pehunhu hwe dzidziso yake, kujekeserwa. Ndoziva chikonzero nei nhasi. Buddha pachake anga asina kusiyira gwaro kumutsa uye nekuti vazhinji vevanyori veaya manyorerwo havana kuwana kujekeswa pachavo.
Pasina zviitiko nekujekeswa, zvisinei, zvinyorwa paBuddhist hazvifanirwe kunyorwa. Pakaonekwa biography yangu "Shaolin-Rainer" muna 2019, vanhu vazhinji vandibvunza kuti: "Kunaya, wadii kuisa pfungwa dzako papepa"?
Segweta, hazvina kundiomera kunyora magwaro, asi ndinonyora nezve dzidziso dzaBuddha?
Nekusahadzika kudiki ini ndakabvuma uye iyi ndiyo nzira yakagadzirwa blog yangu, iyo yakasvika mamirioni avanhu munguva pfupi zvikuru uye ikozvino inogona kuverengerwa mumitauro inopfuura 160 pasi rose.
Mune maonero angu, Buddhism haisi chitendero, huzivi uye maonero enyika.
Buddha haana kumbonzwa saMwari, akataura pachena kuti munhu haafanire kumunamata. Akayambira vateveri vake kuti vatsvage kujekeswa.
Buddhism muhupenyu hwezuva nezuva
ChiBuddha muhupenyu hwezuva nezuva chinoreva kuve nekufungisisa muhupenyu hwezuva nezuva.
Ini, Rainer Deyhle, ndiri wekutanga kuzivikanwa weGerman Shaolin uye akatanga Shaolin Tempel Dhechland muBerlin uye akaritungamira kwemakore mazhinji.
Ini ndinotsanangura chimiro cheChan (Zen) Buddhism nenzira yakapusa uye inonzwisisika; nzira dzakasiyana dzemazuva ese dzekudzidzira muenzaniso uye dziri nyore kunzwisisa.
Bhuku rangu nyowani ikozvino riri muzvitoro!
Ndinoda kutenda shamwari dzangu dzese uye vandinozivana vandiperekedza kuburikidza nehupenyu hwangu uye vakateedzera kusvika nhasi. Izvi ndizvo: Vabereki vangu nemwanasikana, tenzi wangu Shi Yan Zi, Abbot Shi Yong Xin, Taema, Ta, Tian Tian & FHY, Georgia, Rolf Liem, Carsten Ernst, Shi Heng Zong, Melena, Carsten Römer, Jan R., Bin, Heinz, Yannis, Lufti, Michail, Peter, Ümi, Tien Sy, Stefan Hammer, Andre Mewis, Billy, Traudi, Rainer Hackl, Hurz, Romano, Martin, Ashley, Dr. Thing. Kutenda kwakakosha enda kushamwari yangu Karl Kronmüller, uyo akatanga chinhu chose nebhuku Shaolin-Rainer, naSven Beutemann, vakandisundidzira nekusingaperi kuti nditange kunyora peji rino.
Abbot Shaolin Tembere China
Senior Master Shaolin Tembere UK
Abbot Shaolin Tembere Kaiserslautern
Chief Master of Shaolin Tembere Kaiserslautern
Tenzi wangu Shi Yan Zi
Kusangana naYan Zi kwakachinja hupenyu hwangu zvakanyanya. Pandakataura naye kumamongi panguva iyoyo, ndakanga ndisingazivi kuti shanduko iyi ingangove yakadii kwandiri. Nhasi Shi Yan Zi anotungamira Shaolin Tembere muEngland akamiririra inozivikanwa Abbot Shi Yong Xin. Shifu (Master) Shi Yan Zi, ndiye mumwe wevadzidzi vechikoro chepamusoro che abbot uye anotungamira GongFu tenzi pakati pegumi nemakumi matatu nemana chizvarwa chaShaolin. Shi Yan Zi akadzidziswa paMarate Arts College yaShaolin muna 34 uye akatanga kudzidza zvakananga Abbot Shi Yong Xin muna 1983.
Ku Tembere yeUK
Kudzivisa zvakaipa zvese, kugadzira zvese zvakanaka, kuchenesa pfungwa. Iyi ndiyo Buddha inogara yakapfekedzwa.
Naizvozvo chiBhudha chinotidzidzisa mutoro, zvinotiratidza kuti isu tine mhosva yezvatinoita nezvatisingaite, uye hatigone kupomera mumwe munhu mhosva nazvo; kuti isu tinofanirwa kuita zvinhu kuburikidza nesimba redu toga. Buddha anotiratidza nzira, asi isu tinofanira kuzviita isu pachedu.
ZVOKUPEDZISIRA STORI Kubva kuRopa
arun2020-04-08T07:59:55+02:00April 8th, 2020|0 Comments
arun2020-04-08T06:38:44+02:00April 8th, 2020|0 Comments
Ini handikwanise kutonga kuti nyaya yangu yakanakira here.
Ini ndairarama uye ndaivapo, ndaigamuchira zvinonetsa, ndaishungurudzika, asi ndaigara ndichitambudzika kusvika kutsoka dzangu. Kudzokorora hakugone. Handidi kuvanza chokwadi chekuti kudada kunondibata. Zvimwe unogona zvakare kunzwa zvakanaka zvinhu pano uye utore pamwe newe mupfungwa dzako.
Copyright © 2019 Shaolin Riner - Yakagadzirwa ne ❤ nevanhu vakuru. rupawo | Privacy | udza mashoko
Iyi webhusaiti inoshandisa makuki kuvandudza ruzivo rwako. Isu tinofunga kuti unobvuma, asi unogona kuzvinyora kana uchida. Cookies marongeroBvuma